Golaha Amaanka QM Oo mar kale ka hadlay Xaalada Soomaaliya – XAMAR POST
Golaha Amaanka QM Oo mar kale ka hadlay Xaalada Soomaaliya
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa Bayaan ka soo saaray xaalada cakiran ee dalka Soomaaliya iyadoo goluhu uu soo dhoweeyay soo jeedinta Golaha Ammaanka ee Midowga Afrika.
Qoraalka ka soo baxay Golaha Ammaanka ayaa ugu horeyntii lagu muujiyay walaaca ku saabsan khilaafka hareeyey arrimaha doorashada dalka.
“Xubnaha Golaha Ammaanku waxay muujiyeen sida ay uga walaacsan yihiin sii socoshada cakiran ee siyaasadeed iyo khilaafaadka u dhexeeya hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee Soomaaliya ee ku saabsan qaabka doorashada.
Xubnaha Golaha Ammaanku waxay dib u xasuusteen horumarka baaxadda leh ee laga sameeyay tobankii sano ee la soo dhaafay Soomaaliya, oo ay ka mid yihiin xagga amniga, dimuqraadiyadda, dib u habeynta siyaasadeed iyo horumarinta dhaqaalaha, gaar ahaan cafinta deynta waxay ku ammaaneen dadka Soomaaliyeed, masuuliyiinta Soomaaliyeed, Midowga Afrika.
Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) iyo waddamada ay ciidammada ka joogaan Soomaaliya, Qaramada Midoobay iyo saaxiibbada kale ee caalamiga ah ee Soomaaliya doorka ay ka qaateen howshan.”
Golaha ayaa walaac ka muujiyay in sii socoshada khilaafka madaxda dalka ay horseedi karto in la iska ilaawo dhibaatooyinka dalka ka jira.
“Xubnaha Golaha Ammaanku waxay carrabka ku adkeeyeen in khilaafka taagan ee ku saabsan qaabka doorashada uusan kaliya baabi’in doonin horumarkan dadaalka badan lagu kasbaday laakiin uu sidoo kale ka weecinayo dhibaatooyinka culeyska leh sida daadadka, abaaraha, ayaxa ayaxa, aafada COVID-19, iyo la dagaalanka argagixisada khatarta Al-Shabaab.
Waxay carrabka ku adkeeyeen in is-afgarad laga gaaro arrimaha doorashooyinka ay taageeri doonto oo fududeyn doonto horumarka iyo horumarka sii socda ee Soomaaliya iyo dadkeedaba.”ayaa lagu sheegay Qoraalka.
Sidoo kale qoraalka ka soo baxay Golaha Ammaanka ayaa lagu xusay qaabka ugu wanaagsan ee doorasho dalka loogaga qaban karo.
“Xubnaha Golaha Ammaanku waxay hoosta ka xariiqeen in is afgaradku muhiim u yahay qaab kasta oo doorasho oo si guul leh loo gaarsiiyo. Waxay xuseen heshiiskii 17-kii Sebtember inuu weli yahay aasaaska kaliya ee ay ansaxisay Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dhammaan Dowladaha xubnaha ka ah Federaalka.
Xubnaha Golaha Ammaanku waxay markaa ugu baaqeen dhammaan dhinacyada inay diidaan rabshadaha oo ay dib u bilaabaan wadahadalka si degdeg ah oo aan shuruud lahayn.
Dhageyso: Soomaaliya Oo Udigtay Dawladaha Kenya & Jabuuti
Dhageyso: Xildhibaano udigay Xubnaha Beesha Caalamka